Bit By Bit - Kugadzira kubatana kukuru - Activities
dambudziko rekuoma: nyore , midzi , zvakaoma , zvakaoma zvikuru
inoda math ( )
inoda coding ( )
[ , , , ] Chimwe chezvinhu zvinonakidza zvakataurwa naBenoit uye vashandi pamwe chete (2016) tsvakurudzo pamusoro pevanhu-kunyorwa kwemashoko ezvematongerwe enyika ndeyekuti migumisiro inowanikwa zvakare. Merz, Regel, and Lewandowski (2016) anopa ruzivo rweManifesto Corpus. Edza kubereka chifananidzo 2 kubva Benoit et al. (2016) achishanda nevashandi veAmazon Mechanical Turk. Ndezvipi zvakafanana zvaive mitsva yako?
[ ] MuMushonga weChluenzaNet chikwata chezvipiri chevanhu chinorondedzera chiitiko, kuwandisa, uye hutano hunotsvaga hune chokuita nehutano-se-chirwere (Tilston et al. 2010; Noort et al. 2015) .
Enzanisa uye osiyanisa maitiro, mari, uye zvichida kukanganisa mu InfluenzaNet, Google Flu Trends, uye tsika dzekutsvaga mafungiro ekufambisa.
Chimbofunga nguva isina kugadzikana, yakadai sokuputika kwomuitiro wekurima wefuruwenza. Rondedzera zvingaita zvikanganiso mune imwe sangano.
[ , , ] Economist ndeye magazini yemagazini yevhiki nevhiki. Ita munhu kuverenga purojekiti kuti uone kana chiyero chevakadzi kuvarume vari pachivharo chave chichishandurwa kupfuura kwenguva.
Iyo magazini inogona kuve yakasiyana zvakasiyana munzvimbo dzakasere dzakasiyana (Africa, Asia Pacific, Europe, European Union, Latin America, Middle East, North America, uye United Kingdom) uye inogona kushandiswa kubva mumagazini yepaIndaneti. Sarudza chimwe chezvikamu izvi uye ita shanduko. Iva nechokwadi chekutsanangura maitiro ako nehuwandu hwemashoko ekuti angave akadzokororwa neumwe munhu.
Mubvunzo uyu wakafuridzirwa nemushandiro wakafanana naJustin Tenuto, nyanzvi yezvemasayendisiti pane boka revanhu reCrowdFlower: ona "Time Magazine Zvechokwadi Inofadza Dudes" (http://www.crowdflower.com/blog/time-magazine-cover-data) .
[ , , ] Kuvaka pamubvunzo wapfuura, ikozvino ita nekuongorora kwezvikamu zvisere.
Ndezvipi zvakasiyana zvawakawana kumativi ose?
Inguva yakawanda yakawedzerwa nemari yakatora kuenzanisa kuongorora kwako kune masere ose ematunhu aya?
Fungidzira kuti Economist ine zvinyorwa zana zvakasiyana-siyana vhiki imwe neimwe. Tarisa kuti inguva yakawanda yakawedzerwa nemari ingatora sei kuwedzera kuongorora kwako kusvika zana zana nevhiki.
[ , ] Kune mawebsite akawanda anotora mapurojekiti akazarura, akadai seKaggle. Shingairira mune rimwe ramapuranga, uye tsanangura zvaunodzidza pamusoro pechirongwa ichocho uye nezvemafoni akazaruka munharaunda.
[ ] Tarisa kuburikidza nenyaya yakabuda yepanhau mumunda wako. Pane mapepa angadai akashandurwa sekushambadzira purogiramu yakasununguka here? Sei kana kuti kwete?
[ ] Purdam (2014) inotsanangura kugoverwa kwekuunganidza data pamusoro pekupemha muLondon. Dzokorora humwe simba uye kusava nesimba kwekutsvakurudza uku.
[ ] Redundancy inzira inokosha yekuongorora kukosha kwekugoverwa kwekuunganidza data. Windt and Humphreys (2016) vakavandudza uye vakaedza hurongwa hwekutora mitsara yezviitiko zvinopesana kubva kuvanhu veEastern Congo. Verenga pepa.
Izvo zvakagadziriswa sei zvinoita kuti kuve nekudzivirira?
Vakapa nzira dzakasiyana-siyana kuti vimbise data yakabviswa kubva pabasa ravo. Verengedzei. Ndezvipi zvainyanya kutendesa kwauri?
Ratidza nzira itsva iyo data ingagamuchirwa. Mazano anofanirwa kuedza kuwedzera kuvimba kwaunenge uine mune data nenzira inodhura-inoshanda uye yakanaka.
[ ] Karim Lakhani nevamwe vashandi (2013) vakaita ruzha rwakavhurika kuti vatsvake zvigadziriswe zvitsva zvekugadzirisa dambudziko mumagetsi ekunyora. Vakagamuchira zvinopfuura 600 zvinyorwa zvine 89 nhamba yekombiyuta nzira. Pamusoro pezvinotumirwa, 30 yakapfuura kushanda kweS.S. National Institutes of Health's MegaBLAST, uye zvakanakisisa kuendesa zvakagadziriswa zvakajeka uye zvakakurumidza (zvinokwana 1 000 zvakakurumidza).
Verengai mapepa avo, vobva vaudza dambudziko rekutsvaga kwevanhu revanhu rinogona kushandisa rudzi rumwe rwemakwikwi akazaruka. Kunyanya, rudzi urwu rwomukwikwi rwakasununguka hunofunga nezvekukurumidza uye nekuvandudza kushanda kwesargorithm iripo. Kana iwe usingakwanisi kufunga nezvechinetso chakadai mumunda wako, edza kutsanangura kuti sei kwete.
[ , ] Zvizhinji zvemapurogiramu ekuverengera vanhu anovimba nevatori vechikamu kubva kuAmazonical Turk. Isa kuti uve mushandi pa Amazon Mechanical Turk. Shandisa awa imwe kushanda ipapo. Izvi zvinokanganisa sei pfungwa dzako pamusoro pekugadzirwa, hutsika, uye maitiro emapurogiramu ekuverenga vanhu?